အဖွင့် ဖိုရမ် သတင်းနှင့်အင်တာဗျူးများသတင်းများ ဒဏ်ရာသတင်းများ အင်တာဗျူးများ ဆောင်းပါးပွဲကြိုသုံးသပ်ချက် ပွဲပြီးသုံးသပ်ချက် အထွေထွေဆောင်းပါး မှတ်တမ်းဗီဒီယိုမှတ်တမ်းများ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (ဟိုက်လိုက်) မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ ပွဲစဉ်များ ပထမအသင်းကစားသမားများ နည်းပြအဖွဲ့ဝင်များ အထွေထွေAM ခန့် မှန်းပြိုင်ပွဲ AM ခန့်မှန်း ပြိုင်ပွဲ ဇယား Fan Club AM Forum Lastest Topics
28/12/2014 13:33 ကျွန်တော် ပြန်လာပါပြီ ခင်ဗျာ။ (MrArsenalCrazy)14/02/2014 02:59 မော်ဒရေတာကြီးများ ဆွေးနွေးခန်း (aungmyozaw)11/02/2014 12:41 ဆိုက်မှာ တင်ဖို့ သတင်းဆောင်းပါးများ ဒီမှာ ပို့ပါ (soewinger)11/11/2013 01:22 အာဆင်နယ်ပွဲ အပြီးမှာ ပွားကြမယ် (myanmargunner)
လွမ်းတေးသီမိလေသော ၂၀၁၃-၁၄ ဘောလုံးရာသီ	Boe Aung	ဆောင်းပါး	ဘာလိုလိုနဲ့ ၂၀၁၃-၁၄ ဘောလုံးရာသီတစ်ခုကလည်း အာဆင်နယ်ပရိသတ်တွေအဖို့တော့ အခမ်းနားဆုံး မဟုတ်သော်ငြား လှပအောင်မြင်စွာ ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ရာသီအပိတ်မှာ FA Cup တစ်လုံး ထိုက်ထိုက်တန်တန် သိမ်းပိုက်လိုက်ခြင်းဖြင့် ရှည်လျားလွန်းလှသော ဖလားလက်မဲ့အိပ်မက်ဆိုးကာလများကို ဖြတ်တောက်နိုင်ခဲ့ပြီး၊ အာဆင်နယ် ပရိသတ်များ အရူးအမူးပျော်ရွှင်ခဲ့ကြရသည်၊ ၈-နှစ်ကျော် ၉-နှစ် ခံစားခဲ့ရတဲ့ မချင့်မရဲဖြစ်ရမှု သိမ်ငယ်မှုတွေအားလုံး ဒီဆုဖလား တစ်လုံးတည်းနှင့် ချေဖျက်ပစ်နိုင်ခဲ့ကြသည်။ ရှေ့ဆက်ချီရမည့် ကာလများအတွက် ခွန်အား ပြည့်ပြည့်ဝဝ လုံလုံလောက်လောက် ပိုင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့ပြီ ဆိုရမည်။ တကယ်တော့ ဒီဖလားဟာ FA Cup တစ်လုံးဆိုတာထက် အဖိုးထိုက်တန်လွန်းမှန်း ရင်ဘတ်ချင်းနီးကပ်တဲ့ အာဆင်နယ်ပရိသတ် အချင်းချင်းသာ ခံစားနားလည် နိုင်ကြပါလိမ့်မည်။ ငွေကြေး အလျှံပယ်သုံးစွဲပြီးမှ ရလာမည့် ဆုဖလားပေါင်းများစွာအပေါ် ဂုဏ်ယူမော်ကြွားလိုသည့် အာဆင်နယ်ပရိသတ်များ ရှိကောင်းရှိမည် ဖြစ်သော်လည်း အရေအတွက် အလွန်ပင် နည်းပါးလိမ့်မည်ထင်သည်။ မဝေးတော့သော ကာလမှာပင် လိုအပ်သော ကစားသမားကောင်းများကို စိတ်ကြိုက်ခေါ်ယူအားဖြည့်နိုင်မည့် ဘဏ္ဍာရေးတောင့်တင်းသည့် အခြေအနေမျိုး ရောက်ရှိလာတော့မည်ဟု ယူဆမိသည်။ ရှေ့လျှောက်ပြီး ဆုဖလားများစွာ မသိမ်းပိုက်နိုင် ခဲ့သည့်တိုင်အောင် အာဆင်နယ်ပရိသတ်များအဖို့ အတိုးချပြီး ပျော်ရွှင်သွားရဖို့သာရှိသည်ဟုဆိုလျှင် လွန်အံ့မထင်။
၁၁ ကြိမ်မြောက် FA ဖလား ချန်ပီယံ ဆုရှင် A R S E N A L	myanmargunner	သတင်းနှင့်အင်တာဗျူးများ	အာဆင်နယ် အသင်းသည် FA ဖလား ဗိုလ်လုပွဲစဉ်တွင် Hull City အသင်း နှင့် ယှဉ်ပြိုင်ကစားရာ တစ်ဖက် နှင့် တစ်ဖက် မိနစ် ၉၀ ပြည့်သည်အထိ တစ်ဖက် ၂ ဂိုးစီ နှင့် သရေ ရလဒ် ထွက်ပေါ်နေသောကြောင့် အချိန်ပို တစ်ဖက် ၁၅ မိနစ် ဆက်လက်ကစားကြရာ အချိန်ပို ဒုတိယပိုင်း ၁၅ မိနစ်တွင် အာဆင်နယ် ကွင်းလယ်ကစားသမား ရမ်ဆေး၏ ဂိုးဖြင့် စုစုပေါင်း ၃ ဂိုး ၂ ဂိုး ရလဒ်ဖြင့် Hull City အသင်းအား အနိုင်ရ ဗိုလ်စွဲခဲ့ပါသည်။ ယခုဗိုလ်စွဲခဲ့သည့်အတွက် အာဆင်နယ် အသင်းသည် FA ဖလားကို စုစုပေါင်း ၁၁ ကြိမ်တိုင် ရရှိခဲ့သူအဖြစ် မှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ ဆုပေးပွဲစဉ် အခမ်းအနားမှ ပုံရိပ် အချို့ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါသည်။
အဆင့် ၄ နေရာက အာဆင်နယ်ရဲ့ အောင်မြင်မှုလား။ မတ်လအတွင်း အာဆင်နယ်ကျရှုံးရခြင်း၏ အကြောင်းရင်းများ	Gunner Saw	ဆောင်းပါး	သူ့ဆက်ရှိချင်သေးလား။ ဒါမှမဟုတ် ထုတ်ပယ်ပစ်သင့်နေပြီလား။ မတ်လကျရှုံးမှုတွေရဲ့အလွန်မှာ အာဆင်နယ်နဲ့ အာစင်ဝင်းဂါးအနာဂတ် ဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတာ အာဆင်နယ်ပရိသတ်တွေနဲ့ အခြားအသင်းပရိသတ်တွေကြားမှာ အငြင်းပွားနေကြတယ်။ ပထမဆုံးအနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့အသင်း ဘယ်ဆက်သွားမလဲဆိုတာ အရင်အကဲဖြတ်သင့်တယ်။ လတ်တလော ခံစားရမှုတွေက ဆိုးဝါးလွန်းလို့ အခြေအနေမှန်ကို သုံးသပ်နိုင်ဖို့က အရေးကြီးတယ်။ ဒီလအစောပိုင်းကာလတွေမှာ အာဆင်နယ်ဟာ အရာရာကို မျှော်လင့်ချင်စရာပါ။ ဒါပေမယ့် ချန်ပီယံလိဂ်ကအရင်ထွက်တယ်။ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာလည်း ရှေ့ဆုံးကဦးဆောင်နေရာကနေ ချော်လဲပြီး ပြိုလဲတယ်။ ချဲလ်ဆီးက ခြောက်မှတ်ဖြတ်သွားတယ်။ မန်စီးတီးက လက်ကျန်ပွဲတွေနိုင်ရင် ကိုးမှတ်ဖြတ်ဦးမယ်။ လီဗာပူးလ်နဲ့ လေးမှတ်ကွာနေတယ်။ အတော်လက်မခံချင်စရာကောင်းတဲ့ ရလဒ်ပိုင်းပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ရက်တွေအထိ ဗိုလ်စွဲဖို့အလားအလာကောင်းနေတဲ့အသင်းက အခုချိန်မှာ အဆင့် ၄ နေရာအတွက် စပါး၊အဲဗာတန်တို့နဲ့ ယှဉ်လုရမယ့်ကိန်းစိုက်နေပြီ။ ဒါတွေဘယ်လိုဖြစ်သွားရတာလဲ။ အဓိကကတော့ ပွဲသုံးပွဲကြောင့်ပဲ။ မန်စီးတီးကို ၆-၃ နဲ့ ရှုံးတဲ့၊ ချဲလ်ဆီးကို ခြောက်ဂိုးပြတ်ရှုံးတဲ့၊ လီဗာပူးလ်ကို ၅-၁ နဲ့ရှုံးတဲ့ ပွဲတွေက အာဆင်နယ်ကို ကျရှုံးစေခဲ့တာပါ။ ချန်ပီယံဆုကို စိန်ခေါ်နေတဲ့ အသင်းတစ်သင်းအနေနဲ့တော့ အတော်ကို ဆိုးဝါးလှလွန်းတဲ့ အရှုံးတွေလို့ ဆိုရမယ်။ လက်တွေ့မှာတော့ အာဆင်နယ်ဟာ တကယ့်စိန်ခေါ်ပွဲတွေမှာ အသင့်မရှိခဲ့ဘူး။ ကစားသမားပိုင်းမလုံလောက်မှုနဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှုအမှားတွေက အသင်းကို မြောင်းထဲပို့လိုက်တယ်။ ကစားသမား၊ ကံကြမ္မာ၊ နည်းပြ ဘယ်အပိုင်းမှာမှ မကောင်းခဲ့ဘူး။ ဒီသုံးချက်ကပဲ အာဆင်နယ်ကို ပွဲကြီးတွေမှာ လဲပြိုစေခဲ့၊ ယိုင်နဲ့စေခဲ့တာပဲ။ Read more... Comments (3)
အာဆင်နယ်အသင်း၏ ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ် (၃၂) အား ကြိုတင်သုံးသပ်ကြည့်ခြင်း	Gunner Saw	ဆောင်းပါး	ကစားမည့်ပွဲ - အာဆင်နယ် Vs မန်စီးတီး ကစားမည့်အချိန် - ယနေ့ည မြန်မာစံတော်ချိန် ည ၁၂ နာရီ။ ကစားမည့်ကွင်း - အမ်းမရိတ်။ အာဆင်နယ်အတွက်တော့ အသက်တမျှအရေးကြီးတဲ့ပွဲပဲ။ ဒီပွဲမှာရှုံးရင် ချန်ပီယံဆုကို အပြီးတိုင် လက်ပြလိုက်ရတော့မယ်။ ခြေစွမ်းနဲ့ စိတ်ဓာတ်ပိုင်းအရလည်း လက်ရှိအချိန်မှာ မန်စီးတီးက အထက်ကအသင်း။ အာဆင်နယ်ကတော့ သူ့ထက် နိမ့်ပါးနေတဲ့ အခြေအနေ။ အထူးသဖြင့် စိတ်ဓာတ်ပိုင်းမှာ။ တကယ်အရေးကြီးတဲ့ အချိန်ကျမှ အာဆင်နယ်စိတ်ဓာတ်ပိုင်းက ထိုးဆင်းကျနေသလိုပဲ။ ချဲလ်ဆီးကို ရှုံးပြီးမှ ပိုသိသာလာတယ်။ ဒီအကျိုးဆက်ကြောင့် ဆွမ်ဆီးကို သရေထပ်ကျတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီပွဲမှာ အာဆင်နယ်မဖြစ်မနေပြန်တင်ရလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ပြိုင်ဘက်က မန်စီးတီးဖြစ်နေတာတော့ ကံဆိုးစေတယ်။ Read more... Add new comment
ခြေစွမ်းကို သက်သေပြရန် အချိန်ရောက်ပြီဟု ဗာမယ်လန်းကို အာစင်ဝင်းဂါးသတိပေး	Gunner Saw	သတင်းနှင့်အင်တာဗျူးများ	အာဆင်နယ်နည်းပြကြီး အာစင်ဝင်းဂါးသည် အသင်းခေါင်းဆောင် ဗာမယ်လန်းအား ၎င်း၏ ခြေစွမ်းအစစ်အမှန်ကို သက်သေပြရန် အချိန်ရောက်ပြီဟု သတိပေးစကားဆိုခဲ့သည်။ ဗာမယ်လန်သည် အင်္ဂါနေ့က ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည့် ဆွမ်ဆီးအသင်းနှင့်ပွဲတွင် အသင်း၏ အဓိကနောက်ခံလူ ကော့စီရယ်နီ၏ ဒဏ်ရာကြောင့် ၎င်း၏ ပထမဆုံး ပရီးမီယားလိဂ်ပွဲထွက်ကစားခွင့်ရခဲ့သူဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ဘယ်ဂျီယံနောက်ခံလူသည် ပြီးခဲ့သည့်ရာသီက အသင်း၏နောက်တန်းတွင် နေရာတစ်နေရာ အခိုင်အမာရခဲ့သော်လည်း မာတီဆက်ကာနှင့် ကော့စီရယ်နီတို့၏ တွဲဖက်ညီခံစစ်စွမ်းဆောင်ရည်ကြောင့် လက်ရှိရာသီတွင် အရန်ခုံ၌ အချိန်ဖြုန်းနေရသူဖြစ်သည်။ Read more... Add new comment
အာတီတာအား စာချုပ်သက်တမ်းတိုးရန် အာဆင်နယ်အစီအစဉ်မရှိ	Gunner Saw	သတင်းနှင့်အင်တာဗျူးများ	အာဆင်နယ်အသင်းသည် ၎င်းတို့၏ ကွင်းလယ်ကစားသမား အာတီတာကို သက်တမ်းတိုးစာချုပ်ချုပ်ဆိုရန် စီစဉ်ထားမှုမရှိကြောင်း သိရသည်။ အာတီတာသည် ယခုနှစ်ရာသီကုန်ချိန်တွင် စာချုပ်သက်တမ်းတစ်နှစ်သာ ကျန်ရှိတော့မည့် ကစားသမားဖြစ်သည်။ သို့သော် အာဆင်နယ်အသင်းက ယခုအချိန်အထိ အာတီတာအား သက်တမ်းတိုးရန် အစီအစဉ်မရှိသေးပေ။ ထို့ပြင် လာမည့်နွေရာသီတွင် ပေါင်သန်း ၁၀၀ အထိသုံးကာ Revolution တစ်ခုကို အကောင်အထည်ဖော်မည့် အာဆင်နယ်အသင်းကြောင့်လည်း အာတီတာ၏ အနာဂတ်သည် ပိုမိုမရေမရာဖြစ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အာတီတာသည် အသင်း၏ အပြောင်းအလဲတွင် စွန့်ခွာသွားရမည့်အခြေအနေသို့စိုက်ရောက်နေပြီး မကြာသေးမီက အသင်းဝါရင့်ကစားသမားများကို စာချုပ်သက်တမ်းတိုးမှုတွင် အာတီတာမပါဝင်ခဲ့ခြင်းက ယင်းသတင်းများကို ပိုမိုခိုင်မာစေခဲ့သည်။ Read more... Add new comment
သုံးနှစ်စာချုပ်၊ မက်မောဖွယ်လစာဖြင့် ဆက်ဂ်ညာအား မန်စီးတီးကမ်းလှမ်း	Gunner Saw	မန်စီးတီးအသင်းသည် အာဆင်နယ်အသင်းနှင့် စာချုပ်သက်တမ်းတိုးရန် အဆင်မပြေဖြစ်လျက်ရှိသော နောက်ခံလူဆက်ဂ်ညာအား သုံးနှစ်စာချုပ်နှင့် မက်မောဖွယ်လစာတစ်ရပ်ပေးကာ ကမ်းလှမ်းထားကြောင်းသိရသည်။ဆက်ဂ်ညာသည် အာဆင်နယ်အသင်း၏ ညာနောက်ခံလူနေရာတွင် ခြေစွမ်းပြကစားလျက်ရှိသော ကစားသမားဖြစ်ပြီး ယခုနှစ်ရာသီကုန်ဆုံးချိန်တွင် စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည်ဖြစ်သည်။ အာဆင်နယ်အသင်းသည် အသင်းအတွက် အားထားရသော ဆက်ဂ်ညာအား လက်လွတ်မခံလိုဘဲ တစ်ပတ်လစာ ပေါင်ရှစ်သောင်းအပြင် နှစ်နှစ်သက်တမ်းရှိသော စာချုပ်သက်တမ်းဖြင့် ကမ်းလှမ်းထားသော်လည်း ကစားသမားကမူ ယင်းထက်ပိုမိုသော ကမ်းလှမ်းမှုမျိုးအား အလိုရှိနေသဖြင့် ပယ်ချထားသည်။ Read more... Add new comment
ဒဏ်ရာအကင်းမသေမှုကြောင့် မန်စီးတီးနှင့်ပွဲကို ရမ်ဆေးထပ်မံလွဲချော်	Gunner Saw	သတင်းနှင့်အင်တာဗျူးများ	အာဆင်နယ် နည်းပြကြီး အာစင်ဝင်းဂါးက ပြန်ကစားရန်နီးစပ်နေပြီဟု သတင်းထွက်ပေါ်နေသော ရမ်ဆေးဒဏ်ရာမှာ အကင်းမသေသေးပဲ ဆက်လက်အနားယူရဦးမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ ရမ်ဆေးသည် ပထမရာသီဝက်ကာလတစ်လျှောက် အာဆင်နယ်အသင်းအတွက် ခြေစွမ်းပြကစားပေးခဲ့သည့် ကွင်းလယ်ကစားသမားဖြစ်ပြီး အသင်းအတွက် ၁၃ ဂိုးသွင်းယူပေးထားသူဖြစ်သည်။ သို့သော် ဒီဇင်ဘာလအတွင်းက ဝက်စ်ဟမ်းအသင်းနှင့် ကစားခဲ့သည် ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်တွင် ပေါင်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနောက် ယခုအချိန်ထိ ကာလကြာရှည် နားနေရသူဖြစ်သည်။ အာစင်ဝင်းဂါးက ၎င်းပြန်ကစားနိုင်မည့်ရက်မှာ အလှမ်းဝေးနေသေးကြောင်း အင်္ဂါနေ့က ဆွမ်ဆီးနှင့် သရေကျသည့်ပွဲအပြီးတွင် ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် မန်စီးတီးနှင့်ပွဲတွင် ရမ်ဆေး ပါဝင်နိုင်ခြေရှိသည်ဆိုသည့် သတင်းများ အဆုံးသတ်သွားခဲ့သည့်အပြင် လာမည့်လအတွင်း ဝီဂန်အသင်းနှင့် ယှဉ်ပြိုင်ရမည့် FA ဖလားပွဲစဉ်အထိပါ ပါဝင်နိုင်ချေမရှိသေးကြောင်း သိရသည်။ Read more... Add new comment
ဘန်ဒါအားခေါ်ယူပြီး ကွင်းလယ်ဗဟိုအား ပြုပြင်ရန် အာဆင်နယ်ပြင်ဆင်	Gunner Saw	သတင်းနှင့်အင်တာဗျူးများ	အာဆင်နယ်အသင်းသည် အသက် ၃၂ အရွယ်ရှိပြီဖြစ်သော ဝါရင့်ကွင်းလယ်လူ အာတီတာ၏နေရာတွင် ရေရှည်အစားထိုးရန်အတွက်လေဗာကူဆင်လူငယ်ကွင်းလယ်လူ လားစ်ဘန်ဒါအား ခေါ်ယူရန်ပြင်ဆင်နေကြောင်း သိရသည်။ အသက် ၂၄ နှစ်အရွယ်ရှိ ယင်းဂျာမန်လူငယ်ကစားသမားကို အာဆင်နယ်အသင်းသည် လွန်ခဲ့သည့် တစ်နှစ်ကျော်ကတည်းက စောင့်ကြည့်နေခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး လွန်ခဲ့တဲ့နွေအပြောင်းအရွှေ့က ပေါင် ၁၉ သန်းဖြင့် ခေါ်ယူရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သော်လည်း လေဗာကူဆင်အသင်းက လက်မခံခဲ့သဖြင့် မအောင်မြင်ခဲ့ချေ။ Read more... Comments (1)
အသင်းနှင့် မကြာမီ စာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်း အာစင်ဝင်းဂါးဆို	Gunner Saw	သတင်းနှင့်အင်တာဗျူးများ	အာဆင်နယ်နည်းပြကြီး အာစင်ဝင်းဂါးသည် အာဆင်နယ်အသင်းနှင့် စာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖြစ်လိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း ချဲလ်ဆီးပွဲမတိုင်မီ မီဒီယာများကို ပြောကြားသွားခဲ့သည်။အသင်းနှင့် စာချုပ်သစ်ချုပ်မည်လားဟု မီဒီယာများ၏ မေးမြန်းမှုကို " မကြာမီမှာ ဖြစ်ပေါ်လာဖို့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လက်ရှိမှာတော့ အသင်းအောင်မြင်ဖို့ကိုပဲ ကျွန်တော် ပိုအာရုံစိုက်နေပါတယ် " ဟု ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အာစင်ဝင်းဂါးသည် အာဆင်နယ်အသင်းတွင် ဆယ်စုနှစ်များစွာ နည်းပြခဲ့သည့် နည်းပြကြီးတစ်ဦးဖြစ်ပြီး အသင်းကို အောင်မြင်မှုများစွာ ရယူပေးခဲ့သူဖြစ်သည်။လွန်ခဲ့သည့် ချဲလ်ဆီးပွဲတွင် အသင်းနှင့် ပွဲတစ်ထောင်ပြည့်ခဲ့ပြီ ဖြစ်သည့် နည်းပြကြီးသည် အာဆင်နယ်နှင့်သာ ဆက်လက် လက်တွဲသွားလိုသော သူ၏ ဆန္ဒကို ယခုကဲ့သို့ ဖော်ထုတ်ခဲ့သေးသည်။ Read more... Add new comment
« Start Prev 1234567 8910 Next End »	Page3of 212	Next Match:
THE FA CUP 25th Jan 2015 - တနင်္ဂနွေနေ့ 
မြန်မာစံတော်ချိန် ည ၁၀း၃၀ နာရီ
Premier League Match -22
18th Jan 2015 - တနင်္ဂနွေနေ့ 
စပါး vs အာဆင်နယ် Barclays Premier League
၁၆ မတ်လ ၊ ၂၀၁၄ - တနင်္ဂနွေ
မြန်မာစံတော်ချိန် ည ၁၀း၃၀ နာရီ	ဧည့်ခန်း ထဲက လူစာရင်း
အာဆင်နယ် မြန်မာဆိုက်မှ ကြိုဆိုပါ၏။
Kyi Pyar Yaung - Online Store
Arsenal FC Original Jersey & accessories Shop (Yangon)Email : kpy.store@arsenalmyanmar.comFacebook : https://www.facebook.com/pages/Kyi-Pyar-Yaung/
Arsenal FC Original Jersey and accessories Shop	EPL အမှတ်ပေးဇယား
Instagram Takeover အာဆင်နယ်ရောက် အမြင့်ပျံ ပိုလန်ကြယ်ပွင့် (သို့) ခရိုင်စတီရန် ဘီလစ် ကိုကွီလင်ဟာ အာဆင်နယ်ကွင်းလယ်ခံစစ်အတွက် အဖြေလား Emirates Stadium သို့မဟုတ် အမြောက်တပ်သားများ၏ ခံတပ် ၃ မိနစ်အတွင်း ၂ ဂိုးသွင်းပြီး ၂၀၁၄ ကို နိုင်ပွဲဖြင့် နှုတ်ဆက်လိုက်သည့် အာဆင်နယ် ဝက်စ်ဟမ်း Vs အာဆင်နယ်အသင်း၏ ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ် ၁၉ အား ကြိုတင်သုံးသပ်ခြင်း အာဆင်နယ် ၂ - ၁ QPR ပွဲပြီးသုံးသပ်ချက် အာဆင်နယ်အသင်း၏ ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ် ၁၈ (Boxing Day) အား ကြိုတင်သုံးသပ်ခြင်း အာဆင်ဝင်းဂါး ရေးရမယ့် ဆောင်းရာသီအပြောင်းအရွှေ့ပုံပြင် ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ် (၁၇) လီဗာပူးလ်နှင့်အာဆင်နယ် ပွဲပြီးသုံးသပ်ချက် ရာဇဝင်ထဲမှာ ထားခဲ့လို့ မရတဲ့သူ (သို့) သီယာရီအွန်နရီ အာစင်ဝင်းဂါးရဲ့ ပဟေဠိဆန်နေဆဲ ၂၀၁၄-၁၅ နွေရာသီအပြောင်းအရွှေ့ Benzema ထက် Remy နဲ့ Bony ကို အာဆင်နယ်ဘာလို့ပိုပြီးခေါ်ယူသင့်သလဲ လွမ်းတေးသီမိလေသော ၂၀၁၃-၁၄ ဘောလုံးရာသီ အဆင့် ၄ နေရာက အာဆင်နယ်ရဲ့ အောင်မြင်မှုလား။ မတ်လအတွင်း အာဆင်နယ်ကျရှုံးရခြင်း၏ အကြောင်းရင်းများ ဂိုး အများဆုံး သွင်းထားသူများ
ဘန်တနာ	Copyright © 2016 Arsenal Myanmar | All of Arsenal fans from Myanmar.. All Rights Reserved. Originated by Thatoe.